62% yesaphulelo kwiikhuphoni zeKlabhu yeKhalenda kunye neeKhowudi zeVawutsha
Calendar Club Iikhowudi zekhuphoni
Ukuhanjiswa simahla Iikhowudi zeKhalenda yokuPhucula iiKhowudi kunye neeKhuphoni ngo-Okthobha ka-2021. Iikhuphoni zeKlabhu yeKhalenda kunye neKhowudi yokuThengisa ngo-Okthobha u-2021 zihlaziywa kwaye ziqinisekisiwe. Ikhowudi yokuKhuthaza iKlabhu yekhalenda yanamhlanje: Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 kwiikhalenda ezili-1200, abaCwangcisi neeDayari.
Iipesenti ezingama-10 kwiiOdolo zakho Jonga uphakamiso lweklabhu yeKhalenda ye-19 ukuya kuthi ga ngoku kwi-Extrabux.com. Fumanisa ama-50% ezaphulelo kwiikhowudi zokunyusa iKlabhu yeKhalenda kunye nezivumelwano kule Okthobha 2021.
I-10% ishiye iodolo yakho Okungakumbi malunga neKhalenda yeeKhowudi zeKhowudi kunye neeNkonzo. KwiBrokeScholar sisebenza ubusuku nemini ukuhlaziya eli phepha ngeekhowudi zokukhuthaza ezisebenzayo, amatikiti kunye nezaphulelo zeKhalenda yeKlabhu. Abahleli bethu babek 'esweni iincwadi zeendaba, iiposti zemidiya yoluntu, iiforamu zokuthengiselana, kunye nabathengisi beqela lesithathu ukufumana ezona klabhu zeKhalenda.
$ 5 Cofa + Ukuhambisa simahla Iikhowudi zekhuphoni yeKhowudi yeKlabhu yekhalenda ziyahlaziywa kwindawo yemihla ngemihla. Unokukhetha iziphumo zesigqibo sakho kwixabiso eliphantsi. Into yethu ayikaze ibe semgangathweni. Ikhowudi yonyuselo lweKhowudi yeKlabhu yeKharityhulamu iyavunywa kubaxumi nge-imeyile kunye nokwazisa. Ungazisebenzisa ezi khowudi kuyo nayiphi na into oyithengayo.
Ukongeza i-15% kwiNqaku elinye Iklabhu yeKhalenda yivenkile ekwi-intanethi ebonelela ngee-teasers zobuchopho zemfundo, iipuzzle ezimnandi, imidlalo, iithoyi, imixholo yekhalenda eyahlukileyo kunye nezinye ezininzi ezinomgangatho ophezulu.